Hay’adda Amnety International oo ku baaqday in lakala diro Liyu Booliiska kilinka 5aad - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
HomeWararkaHay’adda Amnety International oo ku baaqday in lakala diro Liyu Booliiska kilinka 5aad
June 1, 2018 – Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa maanta ugu baaqday dalka Itoobiya in si degdeg ah oo kala diro ciidamada loo yaqaan Liyuu Booliis ee ka jira kilinka 5aad ee Ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya kadib markii ay xasuuqeen boqolaal qoys oo Oromo ah isla markaana ay si sharci darro ah u barakiciyeen qoysas badan oo ay guryahoodii gubeen.
Liyu Police ka ayaa gubay in ka badan 40 guri oo ay leeyihiin shacabka Oromada dalka Itoobiya waxayna dileen boqolaal shacab ah oo iskugu jira Oromo iyo Soomaali.
“Dowladda Itoobiya waa in ay si degdeg ah u kala dirto Liyu Police kuna bedesho ciidamo booliis ah oo u hoggaansama shruucda caalamka si loo joojiyo xasuuqa ay wadaan Liyu Booliiska bahaloobayl,” sidaas waxaa yiri Joan Nyanyuki, Agaasimaha Amnesty International ee Geeska Afrika iyo wadamada harooyinka waawayn.
23 iyo 24 Bihsaa May ciidamada Liyu Booliis waxay weerareen deegaano ay leeyihiin qowmiyadda Oromadu waxayna halkaasi ku xasuuqeen shacab beeraleey ah iyagoo gubay 50 guri, boqolaal qooys oo kale ayaa iyaguna barakacay.
“Itoobiya waa in ay joojiso xasuuqa shacabka lagu hayo, si degdeg ahna u kala dirto Liyu Police isla markaana ay qabato guddi madaxbanaan oo soo baara tacadiyadii ay geesteen ciidamada Liyu police” ayay tiri hay’adda Amnesty International.
Ciidamada Liyu Police ayaan xasuuqin oo kali ah shacabka Oromada balse sidoo kale tacadiyo ka gaysta dhulka ay Soomaalidu degto iyagoo sabab la’aan ku xasuuqa shacabka isla markaana xoolahooda dhaca.
Alshabaab Oo Ciidamada dowladda ka qabsaday degmada Moqokoro